Hiantsehatra amin` ny fampandehanana ara-toekarena ny fireneny manomboka izao i Chine hoy ny praiministra Li Keqiang nandritry ny fivoriana. Voafehy ny valanaretina ary efa nahitana paikady izany hoy hatrany izy tamin` ireo solombavambahoaka 3 000 tafavory tany an-toerana niaraka tamin ireo masoivohon` ny firenena samihafa any Sina. Anisan` ireo nanotrona izany ny ambasadaoron` i Madagasikara, Dr Jean Louis Robinson, izay nanamafy fa hanana tombony manokana i Madagasikara taorian’izao fivoriana izao. Ankoatra ny drafi-pampandrosoana (PEM) hanohanan` i Sina an` Madagasikara, manana fanantenana amin ny hialàn’i Madagasikara anaty fahantrana i Sina, hoy Dr Jean Louis Robinson, ary hahazo tombony manokana noho isika manana fifandraisana ara-diplomatika matotra amin izy ireo, indrindra amin izao fandresen’i Sina ny aretina coronavirus izao. Nomarihany ihany koa fa nahitana fahombiazana ny singa artemisinine nampiasain` izy ireo tamin’ny fitsaboana Covid 19 izay ampiasaintsika amin’ny tambavy CVO io, araka ny valiteny nomen’ny Kaomisiona nasionaly ny fahasalamana any Sina.